La-taliyaha Maaliyadda vs Maamulaha Maalka: Farqiga iyo Wax u ekaanshaha
Bogga ugu weyn La-taliyaha Maaliyadda vs Maareeyaha Dhaqaalaha: Dulmar, Farqiga, iyo Waxyaallaha la mid ah
Marka ay timaado dhaqaalahaaga, qorsheynta mustaqbalka waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad keligaa sameyso. Caawinaad xirfadeed ayaa diyaar ah, inkastoo aad rabto inaad hubiso inaad la tashanayso khabiirka saxda ah ee baahiyahaaga. Tusaale ahaan, maareeyayaasha hantida waa hal nooc oo ah lataliye maaliyadeed oo la shaqeeya macaamiil gaar ah: kuwa leh qiime sare.
Si kastaba ha ahaatee, daruuri uma baahnid inaad qani noqoto si aad ula shaqeyso maareeyaha hantida, markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso adeegyadooda xitaa haddii aadan haysan wax badan oo aad ku maalgashato. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo doorashada maareeyaha hantida ama lataliyaha dhaqaalaha, maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa go'aankaaga.
Waa maxay lataliyaha maaliyadeed?
La-taliyaha maaliyadeed waa khabiir ka caawiya macaamiisha adeegyo maaliyadeed oo ballaaran. La-taliyayaasha sida caadiga ah waxay bixiyaan qorsheynta maaliyadeed iyo maareynta maalgashiga. Xaaladaha qaarkood, la-taliyayaashu waxay bixin karaan hal ama mid kale, in kastoo.
Si kastaba ha ahaatee, ereyga "la-taliye dhaqaale" waa mid ballaaran oo aan tixraacin nooc gaar ah oo la-taliye ah.
Sidaan horay u soo sheegnay, baaxadda waxa uu lataliyaha maaliyadeed u soo bandhigi karo macmiilka waa weyn yahay. Adeegyada aad u baahan tahay waxay noqon doonaan kuwo u gaar ah xaaladdaada. Qaar ka mid ah adeegyada aynaan sheegin ilaa hadda waxa ka mid ah tababarayaasha lacagta (la-taliyayaasha kaa caawiya falanqaynta lacagta aad haysato oo kaa caawinaya inaad si fiican u kharash garayso oo aad miisaaniyad u samayso.)
Waxa kale oo jira la-taliyayaal ka caawiya dadka inay ka gudbaan xaddi badan oo deyn ah. La-taliyayaasha maaliyadeed ayaa kaa caawin kara qorsheynta furiinka ama horumarinta ganacsiga yaryar sidoo kale.
Akhri: Sida Loo Dhiso Maalka | 10 Hacks fudud oo lagu dhisayo Hantida
Shuruudaha laga rabo inaad noqoto lataliye dhaqaale
Marka la eego dabeecadda ballaaran ee waxa uu yahay lataliyaha maaliyadeed, kala duwanaanta shahaadooyinka kala duwan ayaa sidoo kale ballaaran. La-taliyaha maaliyadeed ee shatiga leh ee CPA ayaa laga yaabaa inuu ka caawiyo cashuuraha halka la-taliye haysta CLU uu ku takhasusay qorsheynta guryaha, maareynta khatarta, iyo caymiska nolosha.
Shahaadada ugu badan ee aad ka heli doonto qorsheeye maaliyadeed waa CFP® Shahaadooyinka kale ee aad la kulmi karto waa ChFC (la-taliyaha maaliyadeed ee chartered), CFA (falanqeeyaha maaliyadeed ee chartered), iyo FRM (maareeyaha khatarta maaliyadeed).
Hal shuruud oo muhiim ah oo aan ku imaanin qaab shahaado rasmi ah ayaa ah hubinta in lataliyahaaga ama maareeyaha hantida ay yihiin dad aamin ah. Fiduciaries waxay ka diiwaan gashan yihiin SEC waxaana sharcigu ku qasbay inay had iyo jeer maskaxda ku hayaan danta ugu fiican ee maaliyadeed.
Waajibaadka lataliyaha maaliyadeed
Waajibaadka shaqada ee lataliyaha maaliyadeed waxaa ka mid ah:
Dhisidda cilaaqaadka si loo kasbado kalsoonida macmiilka iyo kalsoonida
Falanqaynta macluumaadka maaliyadeed ee macmiilka iyo diyaarinta qorshe habaysan si loo gaadho yoolalka
Cilmi-baarista iyo fahamka suuqyada maaliyadeed, badeecadaha cusub iyo kuwa hadda jira, isbeddellada sharci-dejinta, iyo xeerarka sharciga iyo shuruudaha
Diyaarinta warbixinnada sannadlaha ah si loogu wargaliyo macaamiisha horumarkooda ku aaddan kaafinta yoolalka maaliyadeed
Ka-qaybgalka iyo ka-qaybgalka saxda ah ee ka warbixinta dhammaystirka guusha leh ee barnaamijyada waxbarasho ee joogtada ah
Faa'iidooyinka lataliyaha maaliyadeed
Lataliyaha maaliyadeed ayaa kaa badbaadin kara wakhti iyo lacag. Macaamiisha qaatay talada maaliyadeed waxay guud ahaan ku fiican yihiin hantida maaliyadeed iyo hantida hawlgabka marka loo eego kuwa aan qaadan talada.
Qaadashada la-talinta dhaqaale waxay adiga iyo qoyskaaga ku siin doontaa badbaado dhaqaale oo weyn. Iyada oo loo marayo St. James Place, Afar Maareynta Maalku waxay macaamiisheena siin kartaa xasilloonida maskaxda iyada oo loo marayo dammaanad qaadka St. James's Place.
Tani waxay dammaanad qaadaysaa in talooyinka la-taliyayaashayada maaliyadeed ay u sameeyaan macaamiisheena ay ku habboon yihiin xaaladahooda.
Qiimaha maalgashiga ee St. James's Place wuxuu si toos ah ula xiriiri doonaa waxqabadka lacagaha aad doorato, sidaas darteed qiimuhu wuxuu hoos u dhici karaa sidoo kale kor ayuu u kici doonaa. Waxaa laga yaabaa inaad dib u hesho wax ka yar inta aad maalgelisay.
Maalgelinta sinnaanta ma bixiso amniga raasumaalka ee la xidhiidha xisaab deebaaji oo leh bangi ama bulshada dhismaha.
Mushaharka la taliyaha dhaqaalaha
Marka loo eego Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha (BLS), mushaharka sannadlaha ah ee dhexdhexaadka ah ee goobta la-talinta maaliyadeed wuxuu ahaa $89,330 sanadka 2020. 10ka ugu sarreeya ee goobtan ayaa kasbaday in ka badan $208,000, halka dadka ugu hooseeya 10% ay kasbadeen wax ka yar $44,100.
Xaaladaha ay tahay inaad shaqaaleysiiso lataliye dhaqaale
La shaqee Lataliye Maaliyadeed Haddii:
Ma haysatid qiime sare oo kugu filan maamulaha hantida
Haddii aadan gaarin akoonnada ugu yar si aad u furto akoon maaraynta hantida laakiin aad weli rabto in aad hagto sida loo maareeyo lacagtaada, lataliye maaliyadeed waa doorasho weyn.
Akhri: Waa Maxay Macnaha Maalku? | 10 Xaqiiqooyin ku saabsan Dhisidda Maalka
Waxa kaliya oo aad rabto hanuun hal dhinac oo ah maareynta lacagtaada
La-taliyayaasha maaliyadeed waxay ku yimaadaan qaabab iyo cabbirro walba, dhammaan waxaa loola jeedaa inay kaa caawiyaan inaad wax ka qabato arrimo gaar ah. Tusaale ahaan, haddii aad kaliya rabto in lagaa caawiyo cashuuraha oo aanad maarayn maalgelinta, la taliyayaasha maaliyadeed qaarkood ayaa si fudud taas ku caawin kara.
Waxaad u baahan tahay qorshe-ciyaareed ku saabsan sida aad lacagtaada ugu isticmaali lahayd si wax ku ool ah
La-taliyayaasha maaliyadeed waxaa loo tababbaray inay kaa caawiyaan dejinta yoolalka mustaqbalka fog sida aad uga faa'iidaysan lahayd lacagtaada marka loo eego duruufahaaga, ujeedooyinkaaga, ama hamigaaga.
Ma haysatid wakhti aad ku xakamayso lacagtaada
La'aanta wakhti aad kaga werwerto lacagta kaliya looma hayo shaqsiyaadka sarifka ku leh. Qof walba wuu mashquulsan yahay. Haddii aadan rabin inaad wax ka qabato qaar ka mid ah waxyaabaha uu lataliyaha maaliyadeed kaa caawin karo, waa sababta ay halkaas u joogaan.
10 su'aalood oo lagu weydiiyo lataliye dhaqaale
Haddii aad u maleyneyso inaad sahaminta xiriirka la leedahay lataliyaha maaliyadeed ee dhaqameed waa tallaabada saxda ah, hubi inaad waydiiso 10kan su'aalood inta lagu jiro habka wareysiga.
Ma tahay aaminiye?
Aaminnimadu waxay u shaqeysaa danta ugu fiican ee macmiilka. Kuwa aan daacad ahayn waxay u baahan yihiin oo kaliya inay ku taliyaan alaabada "ku habboon" - xitaa haddii aysan ahayn kuwa ugu jaban ama ugu habboon adiga.
Sidee lagugu qaataa?
La-taliyayaasha waxay isticmaali karaan qaabab ujro kala duwan. Si aad u fududaato oo aad uga fogaato iska hor imaadyada xiisaha, diiradda saar la-taliyayaal ujro-kaliya. Ma helaan guddiyo iibinta alaabta.
Hubi inay tahay ujro-keliya - erayadaas gaarka ah. La-taliyayaasha khidmadda kaliya ayaa laga yaabaa inay dalacaan boqolkiiba hantida ay kuu maamulaan (1% waa wax caadi ah), khidmad siman oo adeegyada ah, ama khidmad saacadle ah.
Haddii kharashku yahay walaac, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad raacdo lataliye Robo-ujro yar ama adeegga qorsheynta onlaynka ah sida kuwa kor ku xusan.
Waa maxay kharashyada aan dhammeeyo?
Marka lagu daro bixinta lataliyaha, waxaad wajihi doontaa kharashyo kale - oo waxaad u baahan doontaa inaad ogaato waxay yihiin. Kharashyadu waxay wax u dhimi karaan kaydkaaga waqti ka dib.
Falanqaynta NerdWallet waxay ogaatay in 1% khidmad-fund wadaag ah ay ku kici karto kun sano $590,000 oo ah kaydka hawlgabka. Waxaad lumin kartaa kala bar qiimahaaga saafiga ah adigoon xitaa ogeyn, waxaad dooneysaa inaad feejignaato.
Maxay yihiin shahaadooyinkaaga?
Xirfadlayaasha maaliyadeed waxay yeelan karaan liis jahawareer ah oo magacyadooda ka dambeeya. Iyo haddii xirfadle maaliyadeed uu tago "la-taliyaha maalgashiga" ama uu leeyahay magacaabista CFP, waa shaqadaada inaad hubiso.
Xog-ururinta xirfadeed ee Hay'adda Sharciyaynta Warshadaha Maaliyadda ayaa kuu sheegi doonta waxa ay ula jeedaan; haddii ay jiraan shuruudo waxbarasho; haddii qof uu aqoonsan yahay magacaabista; haddii uu jiro liis la daabacay oo ah falalka anshax-marinta; iyo haddii aad hubin karto heerka xirfadeed.
Sidee buu xidhiidhkeennu u shaqayn doonaa?
Intee in le'eg ayaad heli doontaa la-taliyaha? Waxaad doonaysaa inaad ogaato inta jeer ee aad la kulmi doonto iyo in isaga/iyada ay diyaar u yihiin wicitaannada telefoonka ama iimaylada ka baxsan ballamaha la qorsheeyay.
Waa maxay falsafadaada maalgashi?
Waa muhiim inaad hubiso inaad leedahay falsafad maalgashi oo isku mid ah. Marka la-taliyayaasha maaliyadeed ay shaqadooda qabsadaan waa marka suuqu hoos u dhaco waxayna kugu qancin karaan inaad ku dhegto isla bogga, si aadan wax uga iibin meesha ugu hooseysa ee wareegga suuqa.
Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo in adiga iyo lataliyahaaguba aad isku timaaddaan qaabka maalgashiga.
Tusaale ahaan, haddii maalgashiga saamaynta ay muhiim kuu tahay, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad waydiiso haddii lataliyahaagu uu awoodi doono inuu kaa caawiyo inaad abuurto faylal ku habboon qiimahaaga.
Qoondaynta hantida aad isticmaali doontaa?
Qoondaynta hantidaadu waa sida aad u abuurto faylal kala duwan. Waxay waddaa inta badan soo celintaada.
Ma doonaysid qof doonaya inuu soo xulo saamiyada shirkadaha waaweyn ee Maraykanka. faylalkaaga waa in ay ku jiraan kaydka gudaha iyo dibada iyo shirkadaha yaryar, dhexe iyo kuwa waaweyn.
Waa maxay halbeegyada maalgashiga ee aad isticmaashaa?
La-taliyeyaashu waa inay adeegsadaan bartilmaameedyo si toos ah ula xiriira waxa lagu maalgeliyay, ama awood u leh inay sharaxaan sababta aysan u sameynin.
Maamulayaasha qaar ayaa isticmaali doona halbeegga caws-man, Tusaale ahaan, lataliyuhu wuxuu leeyahay: "Ujeedkaygu waa inaan garaaco Standard & Poor's 500." Laakin haddii lataliyahaasi uu maalgalinayo faylalka kala duwan ee ka baxsan shirkadaha waaweyn ee Maraykanka, bartilmaameedkaasi waa is-waafajin.
Waqti ka dib waa inay garaacaan S&P 500 sababtoo ah waxay qaadanayaan khatar badan.
Waa kuma masuulkaaga?
Sida habboon, lataliyahaaga maaliyadeed waxa uu shaqaaleysiiyay ilaaliye madax-bannaan, sida dullaal, si uu u haysto maal-gelintaada, halkii aad u noqon lahayd ilaaliye isaga ama iyada.
Taasi waxay bixisaa hubin badbaado oo muhiim ah.
Akhri: Shirkadaha Maareynta Xoolaha ee ugu sarreeya | 2021
Canshuur noocee ah ayaan la kulmayaa haddii aan kula maalgeliyo?
Tani waxay kaa caawinaysaa in la-taliyuhu uu maskaxda ku hayo biilka cashuurta marka uu go'aannada maaliyadeed samaynayo.
Weydiinta ku saabsan cashuuraha iyo khidmadaha waa hab lagu sahamiyo waxa qiyaastaada saafiga ah noqon karto. Waxa aad rabto in aad ogaato waa: Maxaad ku haysaa khidmadaha iyo cashuurta kadib?
Waa maxay maareeyaha hantida?
Maamulaha hantidu waa nooc ka mid ah lataliye maaliyadeed, laakiin xirfadlayaashani waxay khibradooda ku hagaajiyaan macaamiil qiimo sare leh.
Inta badan shirkaduhu waxay u baahan yihiin qiimo saafi ah oo ka badan $1 milyan ama ka badan si ay xisaab u furaan. Sida lataliye maaliyadeed, maareeyaha hantidu wuxuu bixiyaa xidhmo adeegyo kala duwan sida maaraynta hantida, maaraynta maalgashiga, qorshaynta hawlgabka, qorshaynta guryaha, iwm si ay kaaga caawiyaan inaad sida ugu fiican uga hesho lacagtaada.
Maareeyayaasha hantidu waxay caadi ahaan la shaqeeyaan macaamiil saqiir sare leh, laakiin sannadihii la soo dhaafay shirkado gaar ah ayaa suurtageliyay in ay furaan xisaabaadka inkastoo aan si rasmi ah loo kala saarin shakhsi qiimo sare leh (HNWI.)
SEC waxay ku qeexday HNWI qof leh qiimihiisu ka badan yahay $750,000. Shirkadaha qaarkood ayaa hadda haysta ugu yaraan $250,000 halka kuwa kalena laga yaabo inay ka sarreeyaan $10 milyan.
Shuruudaha laga rabo inaad noqoto maareeyaha hantida
Inaad noqoto maareeyaha hantida uma baahna shahaado gaar ah, in kastoo maamulayaasha intooda badan ay yihiin CFA ama CFP® shahaado. Sida xirfad kasta oo kale, qaar ka mid ah maareeyayaasha hantida ayaa leh khibrad dheeraad ah waxayna ka aqoon badan yihiin kuwa kale.
Ha ka waaban inaad wareysato maamule kasta oo suurtagal ah oo aad raadinayso si aad fikrad fiican uga hesho shahaadooyinkooda iyo khibradooda iyo inay yihiin maareeyaha hantida kugu habboon iyo in kale.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa adeegyada sida qalabka xaqiijinta guddiga CFP ama BrokerCheck mid si aad u aragto maamulaha hantida ama caddaynta lataliyaha maaliyadeed ee kasta.
Waxaan kugula talineynaa macaamiishu inay raadsadaan la-taliyayaal maaliyadeed, oo ay ku jiraan maareeyayaasha hantida, kuwaas oo diiwaangashan, aaminayaal.
Waajibaadka maareeyaha hantida
Waajibaadka shaqada ee maareeyaha hantida waxaa ka mid ah:
Si joogto ah ula xiriirida macaamiisha sarifka leh ee ku saabsan waxqabadka faylalka, isbeddelada, dayactirka, iyo dhibaatooyinka iman kara
Joogteynta iyo kobcinta xiriirka qareennada, xisaabiyeyaasha, bangiyada, iyo kuwa kale si loo abuuro hoggaan iyo tixraacyo ganacsi cusub
Diyaarinta iyo fududaynta shirarka lala yeesho macaamiisha iyo kooxda faylalka
Faham qoto dheer oo ku saabsan xeerarka maaliyadeed ee degaanka, gobolka, iyo federaalka sida ay ula xiriiraan faylalka macaamiisha
Samaynta qiimayno khatar ah oo dhamaystiran iyo la shaqaynta iibiyeyaasha dibadda si loo ilaaliyo hantida macmiilka
Mushaharka maamulaha hantida
Celceliska dakhliga sanadlaha ah ee maareeyayaasha hantida ayaa ahaa ku dhawaad ​​$88,000, sida uu qabo Glassdoor. Si kastaba ha ahaatee, xog ururin badan ayaa ka kooban celcelisyadan, waxayna ku xidhan tahay waxqabadka dakhligaagu aad ayuu uga sarreeyaa ama aad uga hooseeyaa.
Akhri: Bangiyada gaarka loo leeyahay Vs maamulka maalka | Top 10 Kala duwanaansho
Xaaladaha ay tahay inaad shaqaaleysiiso maareeyaha hantida
La shaqee Maareeyaha Maalka haddii:
Ma haysatid lacag kugu filan oo aad akoon ku furato
Iyadoo SEC ay u kala soocdo qof leh qiimihiisu ka badan yahay $750,000, shirkadaha qaar ayaa u oggolaanaya xisaabaadka ugu yaraan $250,000.
Ma lihid karti aad si raaxo leh ugu maamusho hantidaada
Inaad haysato saafid ku filan oo ku filan oo lagu shaqaaleysiiyo maareeye hanti si toos ah macnaheedu maaha in qofku uu yaqaan sida wax ku ool ah kaligiis u sameeyo. Taasina waa caadi.
Maareynta qiimaha saafiga ah waxay u noqon kartaa fikrad adag qof aan lahayn tabobar xirfadeed oo gudaha ah.
Waxaad rabtaa hal qof inuu qabto dhammaan dhinacyada hantidaada
Maareeyayaasha hantidu waxay wax walba ka qabtaan marka la eego hantida nolosha ee qofka taasoo ka soo horjeeda hal ama laba baahiyo gaar ah. La-taliyayaasha maaliyadeed waxay qaban karaan adeegyo diiradda saaraya iyaga oo aan kuwa kale ku darin.
Ma haysatid wakhti aad ku maareyso hantidaada
Si fudud loo dhigo, dad badan ma haystaan ​​wakhti ay ku maareeyaan lacagtooda laakiin ma rabaan inay kaliya maalgashadaan ETF-yada.
Maamulaha hantida ayaa kaa caawin kara maaraynta dhinacyada maareynta hantida maaliyadeed ee aadan waqti u haysan.
Faa'iidooyinka maamulaha hantida
Waxay caawisaa abuurista qorshe maaliyadeed
Adeegyada maareynta hantida waxay ka caawiyaan maalgashadayaasha si xisaabin iyo habaysan inay u abuuraan jirkooda. Maareeyayaasha maalku waxay la yimaadaan iyagoo ku hubaysan t xirfado ka caawiya inay fahmaan shuruudaha macmiilka iyo yoolalka maaliyadeed.
Kuwaas waxaa lagu xisaabtamayaa marka xeeladaha maaliyadeed la dejiyo. Maamulaha hantidaada waxa uu gelinayaa wakhti badan si uu u fahmo baahiyahaaga oo uu kaa caawiyo inaad la kulanto inta ugu badan ee yoolalkaaga dhaqaale ee suurtogalka ah.
Waxay kaa caawinaysaa baabi'inta culayskaaga dhaqaale
La-taliyayaasha qaniyadu waxay leeyihiin faham qoto dheer oo ku saabsan hubanti la'aanta maaliyadeed. Waxay khibrad u leeyihiin inay kuu qaataan go'aamada maaliyadeed ee muhiimka ah, haddii baahidu timaado. La-taliyayaasha qaninimada ayaa kaa caawin kara inaad maareyso dhaqaalahaaga inta lagu jiro xaaladaha suuqa ugu xun, taas oo inta badan keeni karta walaac.
Waxay kaa caawinayaan sidii aad u kala hormarin lahayd go'aannadaada maaliyadeed iyagoo ku salaynayo jadwal. Lataliyahaagu wuxuu ku xisaabtamayaa dhammaan tixgalintaada maaliyadeed marka uu abuurayo yoolalkaaga wuxuuna sidoo kale kaa caawinayaa inaad habayso lacagahaaga waqti ka waqti.
Akhri: Sida Loo Dhiso Maalka: 10 Siyaabood Oo Fudud Oo Lagu Dhisi Karo Hantidaada
Waxaad filan kartaa adeegyo gaar ah
Maamulayaasha maalku waxay fahmeen inaysan jirin "hal cabbir oo ku habboon dhammaan" qaacidada marka ay timaado maareynta hantida. Sidan oo kale, qof kasta oo macmiil ahi waxa uu helayaa adeegyada gaarka ah ee maareeyaha hantida u go'an.
Maareeyaha hantidaada u heellan wuxuu abuuraa xeelado maaliyadeed isagoo maskaxda ku haya shuruudahaaga. Wuxuu u adeegaa sida lataliyahaaga maaliyadeed u yimaado, kalsooni.
Waxaad la xiriiri kartaa maamulahaaga wakhti kasta oo aad kala hadasho waxa aad ka filayso isaga, isaga oo isku dayaya inuu fuliyo iyaga oo abuuraya xeelado kala duwan oo lagu abuurayo hanti mustaqbalka dhow iyo ka fogba.
Waxay ku shaqeeyaan hab xidhiidh ku salaysan
Maamulaha hantidaada ayaa si joogto ah uga fekeraya wanaaggaaga dhaqaale taas oo ah sababta, marka baahidu timaado, waxay kula siman yihiin saaxiibkiis.
Ma xiisaynayaan inay kugu cajab galiyaan hadal-haynta dhaqaale balse waxay ku maalgeliyaan wakhtigooda si ay kaaga caawiyaan inaad dhex marto biyaha dhaqaale ee dhibka badan. Waxay kaloo kaa caawinayaan inaad samayso go'aamo maalgashi oo wanaagsan.
Maareeyayaasha maalku waxay adeegsadaan habkan ku salaysan xidhiidhka kaas oo ay ku yeelan karaan is dhaafsi caafimaad qaba oo fikrado iyo aragtiyo ah oo ay dejiyaan xeelado maaliyadeed oo kala duwan.
Aragtida shaqada ee la taliyaha dhaqaalaha iyo maareeyaha hantida
Waxaa jiray 275,200 shaqo sanadka 2020 dhanka latalinta maaliyadda, sida uu qabo BLS. Laakiin tiradaas ayaa la filayaa in ay korodho 10-ka sano ee u dhexeeya 2020 iyo 2030 5%, taas oo ka gaabinaysa celceliska kobaca la saadaaliyay ee xirfadaha kale.6
Xafiiska Tirakoobka Shaqaaluhu wuxuu saadaaliyay in baahida shaqooyinka la-talinta maaliyadeed ay kordhin doonto inta u dhaxaysa 2020 iyo 2030 sababtoo ah dadka da'da ah iyo cimriga dheer.7
Qaybta hoose ee qorshaynta maaliyadeed waxay u janjeertaa inay si dhow ula socoto isbeddelka la-talinta maaliyadda guud ahaan. Maareynta hantida, marka la barbardhigo, waxay ku raaxaysataa kobaca qarxa marka dhaqaaluhu kordho, laakiin waxay qandaraas ka badan tahay la-talinta maaliyadeed guud ahaan inta lagu jiro dhaqaalaha hoos u dhacaya.
FAQs ku saabsan Lataliyaha Maaliyadda vs Maareeyaha Maalka: Dulmar, Farqiga, iyo Waxyaabaha la midka ah
Maxay tahay sababta aan u shaqaaleysiiyo qorsheeye maaliyadeed si uu u maamulo lacagtayda?
Qorsheeyaha maaliyadeed wuxuu awoodi doonaa inuu isku xiro dhammaan dhibcaha maaliyadeed si uu kuu siiyo qorshe guud si aad u gaarto yoolalkaaga maaliyadeed. Isaga ama iyadu waa inay lahaadaan tababar iyo waayo-aragnimo nooc kasta oo ah wax soo saarka maaliyadeed iyo dhinacyada maaliyadeed ee noloshaada - sinnaanta, curaarta, caymiska, cashuuraha, iyo qorshaynta guryaha - si ay u sameeyaan talooyinka saxda ah ee xaaladaada. Qorsheeyaha maaliyadeed wuxuu sidoo kale kuu badbaadin karaa kumanaan doolar oo canshuur dhimis ah wuxuuna heli karaa badeecooyin maalgashi oo sarreeya oo yar ama aan lahayn khatar dheeraad ah.
Shahaadooyinkee ayay tahay inuu haysto qorshaheyga maaliyadeed?
Waxaa jira shahaado qorshayn maaliyadeed oo kala duwan oo kala duwan. Iyadoo xirfadlaha qorsheynta maaliyadeed uu yeelan karo mid ka mid ah dhowr magacyo ama shahaado, ugu yaraan waa inaad hubisaa in isaga ama iyada ay haystaan ​​shati oo ay si wanaagsan ula taagan yihiin maamulka shatiga.
Sideen u dooran karaa qorsheeye dhaqaale oo wanaagsan?
Dooro qorsheeye maaliyadeed oo khibrad u leh la macaamilka macaamiisha xaaladaha la mid ah kuwaaga. Waxa kale oo aad rabi doontaa inaad hubiso in qorshayaha maaliyadeed uu maskaxda ku hayo danahaaga ugu fiican, iyo inaanu isaga ama iyadu kaa iibinayn alaab aan ku habboonayn baahiyahaaga. Warayso qorshayaasha maaliyadeed ee mustaqbalka oo weydii wax ku saabsan aqoonsiga, xeeladaha maamulka, iyo taariikhda waxqabadka.
Sideen u eegi karaa taariikhda lataliyaha maaliyadeed?
Haddii la-taliyuhu yahay Qorsheeyaha Maaliyadeed ee Shahaadsan, hubi Guddiga Heerarka Qorsheeyaha Maaliyadeed ee Shahaadsan. Hay'adda Sharciyaynta Warshadaha Maaliyadeed (FINRA), Komishanka Securities and Exchange (SEC), iyo Ururka Qaranka ee Securities Dealers (NASD) sidoo kale waa meelo lagu hubiyo oo la hubiyo in lataliyaha maaliyadeed aan laga qaadin talaabo edbin ah.
Waa maxay adeegyada ay bixiyaan maareeyayaasha hantida?
Adeegyada ay bixiyaan maareeyayaasha hantida waxaa ka mid noqon kara:
Maareynta maalgashiga iyo talada, oo ay ku jiraan qorsheynta hawlgabka.
Qorshaynta sharciga iyo hantida.
Adeegyada xisaabaadka iyo canshuuraha.
Dib u eegista daryeelka caafimaadka iyo macaashka Lambarka Bulshada.
Qorshayaasha wax bixinta sadaqada.
Ka caawi bilaabida ama iibinta ganacsi.
Maareeyayaasha hantida ma sameeyaan lacag fiican?
La-taliyayaasha maaliyadeed waxay caadi ahaan kasbadaan nolol qurxoon, gaar ahaan maareeyayaasha hantida gaarka ah ee u shaqeeya shirkadaha waaweyn ee Wall Street. Maamulayaasha hantida gaarka ah waxay si fudud u samayn karaan $500,000. Maamulayaasha hantida gaarka ah ee ugu sarreeya waxay sameeyaan ilaa $900,000, taasna kuma jiraan gunnooyinkooda shaqaaleysiinta, kuwaas oo inta badan ku jira malaayiin.
Immisa saacadood ayay maareeyayaasha hantida shaqeeyaan?
Dhinaca iibka shaqada oo keliya ayaa ka badan kara 40 saacadood toddobaadkii. Taas ka sokow, waa inaad weli u adeegtaa macaamiishaada oo aad la socotaa suuqa. Maamulayaasha hantida sidoo kale waa inay waqti u huraan sidii ay u dhisi lahaayeen buug ganacsi.
Kala soocida lataliyaha maaliyadeed iyo maareeyaha hantida waxay u muuqan kartaa mid adag laakiin adoo isticmaalaya macluumaadka maqaalkan, waxaad hubin kartaa inaad la macaamilayso mid ka mid ah lataliyayaasha maaliyadeed ee ugu fiican ama maareeyayaasha hantida baahiyahaaga gaarka ah.
Dib-u-eegista Wealthbar Vs Wealthsimple 2021: Goobta Maaliyadeed ee Shakhsiyeed ee Ugu Fiican
Maareynta Hantida ee Wells Fargo | 2021
Maxay la macno tahay marka aad ku riyootid qof dhimanaya? 15 Xaqiiqooyinka ku saabsan riyada dhimashada
Ka dhaafida Kharashka Fudud ee Fandango 2022: 6 Siyaabood oo aan wali la Fulin
Haddii aad mar hore tikidh filim ka heshay Fandango, runtii waad u mahadcelin lahayd adeegyadooda.…
… Iyo Henry oo qayliyay tani waxay ahayd khalad dhaqaale oo qaali ah! Henry waa ganacsade caan ku ah kartidiisa…
Sida Loo Helo Waraaqo Lacag La'aan ah Ilmahaaga Talaabooyin Fudud
Helitaanka xafaayadda bilaashka ah waa riyada waalid kasta. Sababtoo ah xafaayadda ayaa qarash weyn ku ah in la yeesho…